Ubani lo myalezo wokuthumelelana nge-sexting I-Reward Foundation - Uthando, Ubulili kanye ne-intanethi
Ikhaya The Law Ubani othumelela i-sexting?
Ukuthumelelana imiyalezo nge-sexting, selfies, ukuzilungisa kanye ne-porn ngokuvamile kuxhunyaniswa ndawonye kuwebhu eyinkimbinkimbi. Ukuthumela ama-selfie ama-sexy kuyinto evamile yesimo sokudlala ngothando esenzelwe ubuchwepheshe phakathi kwentsha yanamuhla, kodwa kungaholela ekubikwe emaphoyiseni bese efaka imininingwane yabo.
Amantombazane ashukunyiswa kakhulu ngendabuko ehlonishwayo 'evusa amadlingozi' ekhuthaza umculo nabesifazane ngokugqokisa, begqoka izicathulo zesitayela sobugqila futhi bezithoba ngokuzenzekelayo ngokocansi. La madoda ngokungafani agqoke izingubo ezivamile ezimelele ekubuseni. Abamhlonishwa abaningi besifazane nezinkanyezi ezingcolile zinezizawo zabo.
Besebenzisa ama-Smartphones abo, abesifazane abaningi abasha balingisa lezi zithombe ezincane futhi bazithumele kubangani abazobe benethemba lokuthi bazobaheha. Abafana baphinde bathumele izithombe zabo ze-naked 'zemikhiqizo emihle' ngethemba lokugcizelela amantombazane.
Ucwaningo lubika ukuthi iningi lezinsizwa licela, noma liphoqe, abesifazane abasha ukuba babathumele izithombe ezinjalo. Kulaba bafana abasha abasencane kungenzeka ukuthi bahlehlisiwe Playboy omagazini, umkhuba namuhla ukushintshanisa izithombe zamantombazane enqunu, ikakhulukazi abalingani babo esikoleni.
Abanye izinsizwa ngokuqinisekile utholakale enecala lokuthola 'izithombe zobulili ezingcolile' ngenxa yokuthola izingosi ezithandanayo ezivela kumantombazane angaphansi. Kodwa izinkolelo eziningi kakhulu amadoda amadala. La madoda amadala cishe ahlale efana namadoda amancane futhi akhuthaze amantombazane ukuba athumele ama-selfies angenasici noma angenasese. Bavame ukuzibandakanya emakamelweni okuxoxa nakwebhusayithi yokuphola enethemba lokuthuthukisa ukwethenjelwa nokubambisana okwanele ukuze abakhombise ukuhlangabezana nokulala nabo ngaphandle kwemvume yabazali. Esimweni esinzima kakhulu, bawagcoba ngenhloso yokubamba.
Izindlela zokuhlanza zihlanganisa ukufaka ulwazi lomuntu siqu kumuntu omusha abesebenzisa ngalo ngokumelene nabo, besongela ngokuchayeka kubazali babo ngaphandle uma bevuma ukuhlangana nabo ngenhloso yokuzijabulisa ngokocansi.
Ucwaningo olwenziwe ngezingane zocansi lubonisa ukuthi la madoda amadala ngokuvamile anezinto ezibizwa ngokuthi "ukuphazamiseka kwengqondo." Yilokho abakwenqaba ukucindezela ukuziphatha kwabo noma bafune ukusola ingane ngokubheka abadala futhi ngenxa yalokho bebadala.
<< Ukuthumela imiyalezo ngocansi ngaphansi koMthetho wase-England, Wales & NI I-Revenge Porn >>